Vaovao - Ahoana no hitazomana ny familiana fandavahana lalana?
1. Rehefa ny rig fandavahana lalana marindrano mahavita tetikasa iray, ilaina ny manala ny fotaka sy ny ranomandry ao anaty amponga mifangaro ary alatsaho ny rano ao anaty fantsona lehibe.
2. Miova kitapom-batsy rehefa ajanona ny paompy hisorohana ireo fitaovana sy faritra tsy manimba.
3. Diovina ny paompin-tsolika solika ary sorohy ny afo sy vovoka mandritra ny famenoana menaka gazy.
4. Hamarino ny fanosorana ny faritra mihetsika rehetra, asio menaka ary ovay tsy tapaka ao anaty vatan'ny paompy, indrindra ny menaka tsy maintsy ovaina indray mandeha aorian'ny fiasan'ny paompy vaovao mandritra ny 500 ora. Na ny famenoana solika na ny fanovana solika dia tsy maintsy safidiana menaka manosotra tsy misy fangarony ary tsy madio, ary voarara tanteraka ny fampiasana menaka motera fako.
5. Amin'ny ririnina, raha mijanona maharitra mandritra ny fotoana lava ny rig fandavahana atsofony, dia esorina ny ranoka ao anaty paompy sy fantsona hialana amin'ny triatra mamirifiry amin'ny faritra. Raha mangatsiaka ny vatan'ny paompy sy ny fantsona dia afaka manomboka ny paompy aorian'ny fanesorana azy.
6. Hamarino raha miasa ara-dalàna ny refin'ny tsindry sy ny valizy azo antoka. Ny tsindry miasa amin'ny paompy fotaka dia hofehezina tsara araka ny torolalana amin'ny marika. Ny fotoana miasa mitohy eo ambanin'ny tsindry miasa naoty dia tsy tokony hihoatra ny adiny iray, ary ny tsindry miasa mitohy dia ho fehezina ao anatin'ny 80% amin'ny tsindry omena.
7. Alohan'ny fananganana tsirairay dia zahao ny toetran'ny famehezana ny ampahany amin'ny famehezana. Raha misy famoahana solika sy rano dia amboary na soloo avy hatrany ny tombo-kase.
8. Alohan'ny fananganana tsirairay dia zahao raha voabahana ireo faritra mihetsika ary raha marina sy azo itokisana ny fomba fanovana hafainganam-pandeha.